अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई दिएको विवादीत १७ बुँदामा के छ ? - Banking Khabar
अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकलाई दिएको विवादीत १७ बुँदामा के छ ?
Bankingkhabar /August 8, 2021
बैंकिङ खबर । हालै संसदको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको १७ बुँदे निर्देशनात्मक सुझावले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप हुन थालेको विश्लेषण गरिएको छ । संसदको अर्थसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ठाडो सुझाव दिएको छ । यसका अक्षरहरु केलाउने हो भने सोझै राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप देखिन्छ । संसद र अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने हो भने नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था धरासायी हुने निश्चित छ ।
संसद्को अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न १७ वटा बुँदामा सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ । समितिले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिले यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत छलफल गरिसकेको छ । समितिले कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउने जस्ता विषयमा समेत जोड दिएको छ ।
अर्थ समितिको १७ बुँदे निर्देशन यस्तो छ :
छिमेक लघुवित्तका नवनियुक्त अध्यक्ष जोशीद्वारा शपथ ग्रहण